Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’ | Maanta Online
Home / Faallo / Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’
Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’
Posted by: admin in Faallo November 30, 2016	Comments Off on Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’ 514 Views
Iyadoo dalka uu galay xaalad kala guur siyaasadeed ah isla markaana ay iminka gabagabo marayaan doorashooyinka labada aqal kan sare iyo midka hoose taasi oo Soomaaliya noqoneyso markii ugu horeysay oo xukuumad noocaan ah yeelato.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo afar sano ah soo maamulayay madaxtooyada Villa Somalia ayaa lagu xusuustaa qaabka uu ku hoggaaminayay Xukuumadda xilligeedu dhammaaday, isagoo bedello muuqda ku sameeyay hannaanka dowladnimada dalka.
Waxqabadka Dowladda Federaalka oo isugu jira ammaan iyo dhaliil, arrimaha uu ku guuleystay waxaa ka mid ah inuu wada shaqeyn buuxda la yeeshay hoggaanka Baarlamaanka kaddib markii uu ka badbaadiyay in cod loo qaado kalsoonida Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Baarlamaanka doortay sanadkii 2012-ka ayaa mudadii uu xilka hayay waxaa kale oo uu ku guuleystay xiriirka arrimaha dibadda, isagoo ka qeyb galay shirar caalami ah isla markaana kulamo kala duwan la qaatay Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska, Madaxweyne xilka ka sii degaya ee dalka Mareykanka Brack Obama iyo madax kale.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu xardhay sawirada musharaxiinta xilka Madaxweynaha u taagan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin rag horay xilal kala duwan uga soo qabtay dalka, waxaa ugu cadcad: Madaxweynihii Dowladdii Federaalka Shariif Sheekh Axmed, Maxamed C/llaahi Farmaajo Ex Ra’iisal Wasaarihii hore ee xukuumadii KMG ahayd, Jabriil Ibraahim Cabdulle Madaxii hore ee Hay’adda Cilmi Baarista iyo wadahadalka bulshada CRD iyo xubno kale.
Dad badan ayaa shaki ka muujiyay hadallada ka soo baxay Madaxweynaha xilka banneynaya ee Dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax Madaxweyne isla markaana halku-dhig ka dhigtay “Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira”.
Durbadiiba waxaa soo baxayay aragtiyo kala duwan oo laga muujinayo rajada gashay Madaxweyne Xasan Sheekh inuu mar kale hoggaamiyo xukuumadda cusub ee iminka la yagleelayo, iyadoo koocaha mucaarada Madaxweynaha ay sheegeen in Qaranku aanu lahayn qof ee muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u siman yahay.
Kooxda Madaxweynaha taageersan ee Damuljadiid lagu magacaabo ayaa haatan rajadeedu sii laciifeysaa kaddib markii lagu dhaliilay tacadiyo ay ka geysteen goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka iyagoo adeegsanaya shaatiga Dowladnimada, iyadoo waxgarad, odayaal iyo ergooyiinka beelaha ku sameeyay faragelin aan loo aaba yeelin.
Arrintu si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho hadda kama jirto ololaha musharaxnimada Madaxweyne Xasan Sheekh oo u dhow xilligiisii hore waddo kasta lagu arki jiray sawiradiisa isagoo gacanta taagaya isla markaana dhoola caddeynaya, waxayna arrintaasi muujineysaa inuu mugdi weyn hareeyay musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha 2016-ka.
Previous: Wasiir Maareeye: “Xarunta CID-da ayaan dacwad ka geeyay Boqorka beesheyda”
Next: Somali community fears backlash after Ohio State attack